Xafladaha Dabaaldaga Degmooyinka, Gobolada iyo MMka Cusub Iyo Kaalinta Qurba Joogtu kuyeelanayaan Oo Faah-faahin Laga Bixiyay - Cakaara News
Xafladaha Dabaaldaga Degmooyinka, Gobolada iyo MMka Cusub Iyo Kaalinta Qurba Joogtu kuyeelanayaan Oo Faah-faahin Laga Bixiyay
Jigjiga( Cakaaranews ) Isniin 29 February 2016, Xarunta Dhexe ee XDSHSI ayaa faah faahin ka bixisay sida ay u dhacayaan Xafladaha loogu dabaaldagayo Degmooyinka, Gobalada iyo Maamul Magaalooyinka Cusub iyo waliba kaalinta ay ku yeelanayaan qurba-joogtu.
Sidaas darteed waxaa hubaal ah in 25ka Degmo, 2da Gobol iyo 2da Maamul Magaalo ee la ansixiyay ay kaalin laxaad leh ka qaadanayaan qorshaha Koboca isbadalka Dhaqaalaha iyo Horumarka Deegaanka iyadoo shacabwaynaha dalka iyo ka deegaankuba ay aad ugu farax san yihiin horumarkan balaadhan ee u soo korodhay deegaanka.
Hadaba sida aan wada ogsoonahay deegaanka soomaalida dad badan oo u dhashay ayaa ku maqan qurbaha kuwaas oo isugu jira kuwo waxbartay, kuwo aan waxbaran, kuwo shaqaysta, iyo kuwo fadhi kudirirnimo kali ah ay shaqo u tahay. Sidaas darteed waxaa la go'aamiyay in qurba-joog kasta degmada ay kasoo jeedo ay u dhisto hal (1) Health Center oo ay ku baxayso 7 milyan oo Birr iyo hal (1) Dugsi dhexe iyo inay waliba bixiyaan kharashka ku baxaya xaflada dabaaldaga iyadoo kaalinta dawlada iyo shacabka deegaanku ay kaga qayb-qaadanayaan horumarinta degmooyinka cusub ay tahay mid muqadas ah oo geed kago’an ah.
Dhanka kale dhisida mashaariicda, si qurba-joogtu ay damaanad dawladeed u hesho ayaa waxaa fulinaya Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya oo ah hay'ad ka sharciyaysan Dalka itoobiya. Maamulka iyo dabagalka miisaaniyadana waxaa yeelan sadex oday oo dagmada u dhashay, hal wiil iyo hal gabadh oo dhalinyaro ah, maamulka Gobalka ay dagmadu katirsan tahay, Xarunta dhexe iyo maamulka ururka hormarinta soomaalida itoobiya.
Sidaa awgeed go’aaminta Xaflada dabaaldaga dagmada waxaa iska leh XDSHSI, Xafiiska Maamulka DDSI iyo Gudoomiyaha Gobalka ay dagmadu katirsanatahay.
F.G intaa wixii kabaxsan Cidii samaysata Xaflad ay ugu dabaaldagayso dagmooyinka cusub iyadoo aan gudiga aqoonsi ka haysanin way samaysan karaan laakiin wax ahmiyad ah ma yeelanayso.
Hadaba Nidaamka ay lacagta u soo dirayaan qurbajoogtu waxa ay noqon doontaa Acount laga furi doono dhamaan bangiyada iyo xawaaladaha ka sharciyaysan dalka itoobiya iyada oo ay lacagahaas maamuli doonaan odayaasha iyo ururka Horumarinta soomaalida Itoobiya.waxaana dabagal iyo Audit kusamayn doona si cad-cadaanta iyo isla-xisaabtanka loo meelmariyo Gudi ugu yaraan 3 xubnood kakooban, ugu badnaana 5 xubnood oo ay iska soo doorteen qurbajoogta ka soo jeeda dagmadaas si ay u dabagalaan in lacagihii lasoo ururiyey ay meeshii loogu talagalay ku baxeen iyo in kale.
F.G Go’aankan waxaa lagu kala saari doonaa ama ahmiyada ugu muhiimsan ee laga leeyahay ay tahay in lagu kala saaro laguna ogaado degmadii leh qurbajoog dadkooda danaynaysa inay helaan waxbarasho iyo caafimaad, dareen, damqasho iyo wadaniyad leh iyo dagmada aan lahayn wax qurba-joog iyo ehel toona ama qurba joogtoodu tahay kuwa loo yaqaano mashaqaystayaal muran badan oo dhaqan bi'is ah.
FG: Dagmada ay qurbajoogtoodu yeelan waydo dad wax soo dira waxaa loo aqoonsan mid ehel la’aan ah. waxaana looga qarafayn qurba-joogta dalka itoobiya, qurba-joogta soomaalida soomaaliya, qurba joogta soomaalida keenya, iyo kuwa qurbajoogta soomaalida jabuuti.
Ø FG: Haduu hal nin oo qurba joog ah uu yidhaahdo anaa dhisi lagama yeelayo. waxaa intaa dheer, hadii shacabka deegaanka iyo ganacstada u dhalatay dalka gudihiisa ay dhahaan anagaa bixinayna ama dhisayna lagama aqbalayo. balse, waxaa laga aqbali oo kali ah hadii laga waayo qurbajoogta oo ay ganacsatada kasoo jeeda degmada ay dhahaan anagaa dhisayna maadaama oo larabo in lagu kalasaaro qurba-joogta iyo sida ay dareen iyo damiir lahaansho ugu leeyihiin bulshadooda.
Ø -Lacag laga ururiyay dadka deegaanka joogana laguma samaynayo. kali ah waxaa laga rabaa qurba joogta. waxaana la doorbidayaa in lacagaha lasoo dirayo lasoo mariyo bangiyada caalamiga ah ee itoobiya iyo xawaaladaha dalka ka sharciyaysan oo kaliya.
Ø - Xataa hadii ay qurba-joogtu lasoo hadlaan qaran joogta oo ay dhahaan naga sii bixiya lagama aqbalayo.
Ø -Account numberka iyo gudiga lagu soo dirayo dib ayaan ka soo sheegi doonaa, iyadoo xiliga la idiin soo sheego laga bilaabo 10 bari oo kali ah la idinka sugi doono soo dirida lacagaha
Ø - Dagmooyinka xiliga loo cayimay ku soo dira waxay xukuumada DDSI siin doontaa shahaado sharaf heer sare ah oo aan inaba caadi ahayn oo si casri ah loo sameeyay.
Ø - Kuwa wakhtiga loo cayimay ku soo diri waayana waxaa loo aqoonsan in degmadaasi mudan tahay in looga qarafeeyo qurbajoogta kale oo aysan sheegan karin wax qurbajoog ah mustaqbalka oo ay qurbajoogtooduna tahay mashaqaystayaal jajab ah.